ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: သေးသေးလေးနဲ့ အလွန် အစွမ်းထက်တဲ့ Antivirus - Smadav v10.1 PRO 2015 + Serial Key
သေးသေးလေးနဲ့ အလွန် အစွမ်းထက်တဲ့ Antivirus - Smadav v10.1 PRO 2015 + Serial Key
ကျွန်တော် အရမ်း သဘောကျ နေတဲ့ Antivirus တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ SmadAV 10.1 Pro ကတော့ Version အသစ် ထွက်လာ ပြန်ပါပြီ။ Windows OS မှာ ကပ်ငြိ ဒုက္ခပေးနေ တဲ့ Virus အမျိုးအစားတွေ အများကြီးကို ရှာဖွေ သတ်ပေးနိုင်ပြီး Task Manager ခေါ် မရတာ၊ Registry ကို ပိတ်ထားတာ၊ ဖိုင်တွေ Hidden ဖြစ်နေ တာတွေကို ဒီကောင်နဲ့ ချက်ချင်း ဝင်ရောက် ထိန်းချုပ် နိုင်ပါတယ်။
Signature ပေါင်း 8296 မျိုးကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းဖို့ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ Pro Version အတွက် Update တွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Shortcut Virus, Wind32, Sality ကိုတော့ အထူး နှိမ်နင်းပေး ပါတယ်။ အဲဒီ Antivirus ကို ကျွန်တော် လိုချင်နေတာ ကြာပြီဗျ။ ဓါတ်ပုံဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို ကြည့်ကတည်းက သဘောကျ နေတာပါ။
ဒီ Antivurus ကို မနေ့ညက နည်းနည်း ကလိကြည့် လိုက်တာ သူ့ရဲ့ Protection တွေကို အတော်လေး သဘောကျ လို့ အခြားသော သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးပြု နိုင်အောင်လို့ ပြန် တင် ပေးလိုက် ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ထဲသို့ USB ထိုးလိုက်တာနဲ့ USB ကို အသေးစိတ် Virus Scan ဖတ်ပေး နိုင်တာ တော်တော် မိုက်တယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Feature တွေ ကလည်း အများကြီးပါ။ USB Virus Scan သာမက PC တစ်ခုလုံး ကိုပါ Virus Scan လုပ်ပေးနိုင် ပါ တယ်ဗျာ။
Full Version အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key ကိုပါ ထည့် သွင်းပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 32-bit and 64-bit (x86 and x64) အစ ရှိတဲ့ Window OS တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Activation လုပ်ဖို့ အင်တာနက်ပိတ်၊ Smadav ကိုဖွင့်. Manage ကိုနှိပ်. ညာဘက်မှာ နာမည်နဲ့ ကီးကို ဖြည့်နိုင် ပါတယ်.. အင်တာနက် ဖွင့်ထားရင်တော့ Pro မဖြစ်ပါ.. Free Version မှာတောင်မှ Invalid ဖြစ်ပြီး အမဲရောင် ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်...
Key Features of Smadav 10.1 PRO 2015:
Admin Password – An advanced Admin onalaptop or computer network (such as bars, companies, etc..), Should limit use Smadav 10.1 PRO 2015 by addingapassword gain access to the full features involving SmadAV. Users can still carry out virus scanning and cleaning but aren’t going to be able to access the actual quarantine feature, updates, instruments, and settings on SmadAV with the exception of having an Admin password that you have set.
Automatic Update Online – Smadav 10.1 PRO 2015 are able to do an automatic update with the internet connection whenever there isanew revision. SmadAV will certainly install new revisions routinely without user command.
Faster Scanning – Smadav 10.1 PRO 2015 can be activated to speed the scanning process. SmadAV perform filtering by file type so SmadAV solely scan the files were most likely infected withadisease.
Exception List – SmadAV Different List Pro hasafeature you can use to ignore (ignore) checking the file, folder, oraspecific registry that you thought about safe and should possibly be ignored. Onceafile, folder, or registry put into the Exception List, then he will be ignored and will not be detected by SmadAV while viruses.
Maximize / Resize Display – If you believe the look SmadAV nonetheless less extensive, you can click on the Maximize button or by changing (resize) SmadAV dimension manually. Or if you are feeling SmadAV look too large, you can click the Hide Panel that will automatically make SmadAV smaller by eliminating the right panel.
Smadav 10.1 PRO 2015 Download is compatible and friendly with Windows7(32-64 bit), Windows 8/8.1 (32-64 bit), Windows Vista (32-64 bit), and Windows XP (32-64 bit).
Smadav 10.1 PRO 2015 are multilingual and support languages such as: English, German, Russian, French and Chinese etc.
You can find and download here: Smadav 10.1 PRO 2015 Setup, Smadav 10.1 PRO 2015 Serial Key, Smadav 10.1 PRO 2015 Crack, Smadav 10.1 PRO 2015 Patch, Smadav 10.1 PRO 2015 Keygen, Smadav 10.1 PRO 2015 Full Version, Smadav 10.1 PRO 2015 Patch Keygen Serial.
How to Activate Smadav 10.1 PRO 2015 Steps?
Install SMADAV Trial Setup
Done, Enjoy! Smadav 10.1 PRO 2015 Full version now.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, June 30, 2015
ကဏ္ဍ Antivirus, Security